Maqaa Amantiin lafa weeraruun dhaabachuu qaba! Kichuu
[ April 3, 2020 ] የኮቪ-ድ 19 ወረርሽኝና የኢትዮጵያ 2012 ምርጫ መተላልፍን በሚመለከት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እና የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ የጋራ አቋም መግለጫ	Amharic
HomeAfaan OromooNewsMaqaa Amantiin lafa weeraruun dhaabachuu qaba!
Waan kuni ammas hin dhaabanne? Lafa ummataa maqaa amantitiin saamu fi Gondorummaa babaldhisu.
Maqaa Amantiin lafa weeraruun dhaabachuu qaba.
Kun baadiyyaa Naannoo finfinnee boolee Arrabsaa jedhamuti “ቅዱስ ሰፊራ” ykn lafa qulqulluu maqaa jedhuun tooftaa warri “አብን” ittiin lafa weeraraa jirani dha.kan nama dinqu mootummaan tooftaa kana waan irrati dammaqeef manni mallattoof ijaarame kun yeroo torba diigamus yeroo torbaffaaf deebisanii ijaaranii jiru.